ကျောက်စိမ်းမြေက ကွဲပျက်သွားတဲ့ အိပ်မက်များ - BBC News မြန်မာ
Image caption ဆိပ်မူက ဝေခါမှော်မှာ ရေမဆေးကျောက်ရှာနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး
မြစ်ကြီးနားကနေ စ ခရီးထွက်လာကတည်းက အကွေ့အဝိုက် အတက်အဆင်းများလှတဲ့ လမ်းခရီးကြမ်းကိုနှင်လာရတဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ ကတ္တရာခပ်ပါးပါးခင်းထားတဲ့ ဖားကန့်မြို့အဝင်လမ်းကြောင့် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်သွားရပေမယ့် ဒါက သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။
ကျောက်ခဲ စလုံးစခုလမ်းတွေ မြေသားချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ မညီမညာလမ်းတွေဆီ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။
မညီမညာရှိလှတဲ့ လမ်းတွေဟာ လူတရပ်ကျော်မြင့်တဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြီးတွေ ကာထားတဲ့ ခြံဝင်းကျယ်ကြီးတွေနဲ့ မလိုက်ဖက်လှပါဘူး။
နေအိမ်တွေကိုတော့ လမ်းထက်မြင့်တဲ့နေရာမှာ ဆောက်ထားကြပါတယ်။
မိုးတွင်းဆို မြို့ထဲလမ်းတွေပေါ် ရေဝင်လို့ ဒီလမ်းတွေကို ကောင်းအောင် မပြုပြင်နိုင်တာလို့ ဖားကန့်ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Image caption ဖားကန့်မြို့အဝင် ရွာထဲက လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ ဆေးသုံးပြီး မှိန်းနေကြသူတချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။
မြို့အဝင် လမ်းထောင့်တွေမှာကိုပဲ အင်္ကျီခပ်နွမ်းနွမ်း ဝတ်ထားတဲ့ လဲလျောင်းနေသူ ၁ ဦးစ၊ ၂ ဦးစကို စမြင်ရပါတယ်။
ကားဆရာက "ဒါ ဆေးသမားတွေလေ" လို့ ပြောပြပါတယ်။
"မထူးဆန်းဘူးဗျ၊ ဒါမျိုး မမြင်ရရင်သာ ဖားကန့်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမှာ" လို့ သူက ရယ်ပြီး ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖားကန့်ဟာ ကျောက်စိမ်းမြို့တော်ဆိုပေမယ့် နယ်မြို့လေး တစ်မြို့လောက်တောင် ပကာသန ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိလှပါဘူး။
ဖားကန့်မြို့ကနေ နာရီဝက်လောက် မောင်းရတဲ့ ဆိပ်မူ ကျေးရွာအုပ်စုထဲက ဝေခါမှော်ဆီ အရောက်မှာတော့ လူတွေ စုရုံး စုရုံးဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Image caption ဝေခါမှော်ထဲ ကျောက်ရှာနေကြတဲ့ အမျိုးသမီး ရေမဆေးသမားတချို့
"ကုမ္ပဏီတွေက စွန့်ပစ်မြေစာတွေကို နေအိမ်တွေနား လာပုံတယ်၊ ဟိုရက်က မြေစာပိလို့ နေအိမ်တချို့ ပါသွားတယ်၊ မြေစာတွေ ဆက်မပုံဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာ" လို့ ရွာခံ ကိုချစ်တုံးက ပြောပါတယ်။
ဒီရွာမှာ မြေစာတောင်တန်းတွေ၊ ကြီးမားမတ်စောက်တဲ့ ကျောက်ကမ်းပါးယံတွေက လူနေအိမ်ခြေတွေနား ရှိနေပြီး မြေစာပုံအောက် အိမ်အလုံးလိုက်ရောက်ခဲ့တာ၊ လူသေတာတွေက မကြာခဏဖြစ်နေပါတယ်။
ဖားကန့်က နွံကန်ကျိုးပေါက်လို့ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တချို့ ရပ်စဲ
ကျောက်စိမ်းတွင်းလုပ်ကွက်မှာ လုံခြုံရေးရဲ ပစ်လို့ ရေမဆေးသမားတစ်ဦးသေဆုံး
Image caption ဖားကန့်မြေကို သူတို့ရောက်လာကြတာကတော့ သူဌေးဖြစ်ရေး အိပ်မက်အတွက်ပါ
ဝေခါမှော်ထဲရောက်တော့ နေ့လယ် ၂ နာရီလောက် ရှိနေပါပြီ။
ကျဲကျဲတောက် နေရောင်အောက်မှာ အုပ်စုလိုက်လူတွေ အပူဒဏ်ကို မမှုဘဲ ကျောက်တုံးတွေကိုထုပြီး အလုပ်များနေကြပါတယ်။
ရေမဆေးသမားတွေကတော့ တကိုယ်လုံး အပြည့် အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီအရှည်နဲ့ ခမောက်လို အကာကြီးကြီးပါတဲ့ ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းထားပြီး လက်မှာလည်း ထိပ်ချွန်ချွန် တူ ၁ ချောင်းစီ ကိုင်ထားကြပါတယ်။
သူတို့တွေက ဒါကို စိန်တူ လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
Image caption မှော်ထဲကျောက်ရှာကြသူတွေအဖို့ စိန်တူဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်
ကျောက်စိမ်းလို့ ထင်ရတဲ့ ကျောက်တုံးတွေ့ပြီဆိုရင် စိန်တူ နဲ့ ခေါက်ကြည့်၊ အသံနားထောင်ကြည့်၊ ကျောက်တုံး အပေါ်ယံ ဘယ်လောက်ကွာကျလဲ ဆိုတာကြည့်ပြီး ဒါက ရောင်းတန်းဝင်ကျောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
စိန်တူဟာ ရေမဆေးသမားတွေအဖို့ မရှိလို့မဖြစ်တဲ့ လက်နက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ရပြီဆိုရင် ရေတောင်မဆေးဘဲ တခါတည်းတန်းပြီး ကျောက်ကုန်သည်တွေဆီ သွားရောင်းကြတာမို့ ဒီဒေသမှာ ကျောက်ရှာသူတွေကို "ရေမဆေးသမား" ရယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
မှော်ထဲမှာလည်း လူအရပ် သုံး လေး ပြန်လောက် မြင့်တဲ့ ကျောက်တူးကားကြီးတွေ၊ မြေစာပုံသယ်တဲ့ ကားကြီးတွေက လူးလာခေါက်တုံ့ ဥဒဟို သွားနေကြပါတယ်။
Image caption ပေထောင်ချီ နက်အောင် တူးဖော်ထားတဲ့ ကျောက်မှော်တွေထဲ ဆယ်ဘီးကားကြီးတွေ အဆက်မပြတ် သွားလာနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီကားတွေကို ရှောင်ရတာလည်း မလွယ်လှပါဘူး။
ဝေခါမှော်ထဲ ရေမဆေး ကျောက်ရှာနေတဲ့ မနွယ်နွယ်ဝင်းက "ကျွန်မဆို တစ်ယောက်တည်း မသွားရဲဘူး၊ ဒီကားတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ မရှောင်ဘူး၊ ကားတိုက်မိလို့ သေတဲ့အဖြစ်တွေက ခဏခဏပဲ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိထား" လို့ ကျမတို့ကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း ပြောပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့သူ မနွယ်ဟာ ဖားကန့်ရောက်နေတာ အနှစ် ၂၀ ကျော် ရှိပါပြီ။
ဒီမှာပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့တွေ့၊ အိမ်ထောင်ကျ၊ ခုတော့ သမီး ၃ ယောက် အမေ ဖြစ်နေပြီလို့ သူ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြပါတယ်။
Image caption မနွယ်ဟာ ၁၀ တန်း တက်နေတဲ့ သမီးဖြစ်သူနဲ့ မှော်ထဲ ကျောက်လာရှာလေ့ရှိပါတယ်
စကားပြောနေတုန်းပဲ ရေမဆေးသမားတစုဟာ ကားတွေနောက် အလုအယက် အပြေးအလွှား လိုက်သွားကြပါတယ်။
ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်တွေမှာ ကုမ္ပဏီတွေက စိတ်တိုင်းကျရှာပြီး စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ မြေစာပုံတွေ တင်လာတဲ့ကားတွေ နောက်ပါ။
"ဖားကန့်က ဘယ်လောက်တောင်မှ ကျောက်စိမ်းပေါသလဲဆိုရင် တူးတဲ့နေရာတိုင်းက ထွက်နေတာ၊ ကုမ္ပဏီတွေက စွန့်ပစ်အမှိုက်ဆိုပေမဲ့ ဒီကနေ ကျောက်ကောင်း တစ်လုံးရပြီး လောပန်ဖြစ်သွားသူတွေ မနည်းဘူး" လို့ မနွယ်က ပြောပါတယ်။
နေ့နေ့ညည ကျောက်ရှာပြီး ရောင်းတန်းဝင် ကျောက်လေးတစ်တုံး ရလိုရငြားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ။
"အဲ့လိုမျိုး ကျောက်ရရင်တော့ဆိုပြီး အရမ်းကို စိတ်ကူးယဉ်မိတာပေါ့၊ ကျောက်ကလေး ရရင်တော့…." လို့ မနွယ်က သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးကို ပြောရင်း မျက်နှာကလည်း ပြုံးယောင်သန်းလာပါတယ်။
Image caption မြေစာပုံပေါ်က ကျောက်ရှာနေကြသူများ
သူဌေးဖြစ်ရေး အိပ်မက်တွေနဲ့ ဖားကန့်ကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာကြတဲ့ ရေမဆေးကျောက်ရှာသူ ၃ သိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့ ပြည်နယ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ကျောက်မှော်တွေနား၊ မြေစာပုံတွေနားမှာပဲ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ထိုးထားတဲ့ တဲတွေမှာ သူတို့တွေ မိသားစုလိုက် နေထိုင်ကြပါတယ်။
ကျိုးတို့ ကျဲတဲ ဝါးခြမ်းပြား အကာအရံပေါ် တာလပတ် အုပ်ထားတဲ့ တဲတွေကို ဟိုတစ်စု ဒီတစု မြင်ရပါတယ်။
Image caption မှော်တွေထဲက ဟိုတစု ဒီတစု တဲအိမ်များ
မိုးကာလ မိုးတွေ လေတွေကျပြီဆိုရင် မိသားစုတွေ နေရေးထိုင်ရေး အခက်ကြုံကြရပါတယ်။
"နေစရာမှ မရှိတာ၊ ညတုန်းက ဆိုလို့ရှိရင် အိပ်လို့တောင် မပျော်ဘူး၊ သားအမိတွေ အကုန်လုံး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာ၊ မိုးလေး လေလေး ငြိမ်မှ အိပ်ပျော်တာ.. ယောက်ျားလည်း တခါတခါကျ မိုးလင်းပေါက် ကျောက်ရှာတယ်ဆိုတော့ မရှိဘူး" လို့ မနွယ်က သူ့ဘဝအကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။
မိုးတွင်းဆို မြေစာပုံတွေ ခဏခဏ ပြိုလို့ မြေပိသေဆုံးမှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတာပါ။
ဖားကန့် လမ်းတွေ ဒေသခံတွေ ပိတ်ဆို့
Image caption ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ စွန့်ပစ်မြေစာပုံပြိုလို့ သေဆုံးရတာတွေကလည်း မကြာခဏ ကြုံနေရတာပါ
ပိုက်ဆံနည်းနည်း တတ်နိုင်သူတွေကတော့ မှော်တွေနားက တချို့အိမ်တွေမှာ ငှားနေကြရပါတယ်။
အိမ်တချို့မှာတော့ အောက်ခံမြေမကောင်းလို့ ကြမ်းခင်း သမံတလင်း နေရာအတော်များများမှာ အက်ကွဲကြောင်းတွေ မြင်တွေ့ရပြီး အိမ်လုံးလိုက် အနေ့မြင် ညပျောက် အဖြစ်တွေလည်း မကြာခဏ ကြုံရပါတယ်လို့ ဒီကို ရောက်နေသူတွေက ပြန်ပြောပြကြပါတယ်။
ဘယ်တော့ မြေပိသေမလဲ ဆိုတာ စောင့်ဆိုင်းနေကြရသလိုပဲလို့ ပြောရင်း သူတို့မျက်နှာအမူအရာတွေက မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေကြပုံပါ။
အန္တရာယ်များလှတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဖြေသိမ့်ဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေ သူတို့တွေ ရှာကြပါတော့တယ်။
Image caption ရောင်းတန်းဝင် ကျောက်ကောင်းတစ်လုံးရဖို့က သူတို့တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ
ဖားကန့်မှာ အလွယ်ကူဆုံးရနိုင်တာ မူးယစ်ဆေးပါ။
"ဒီအရပ်ဒေသမှာ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းကလည်း ဒီလိုပဲဆိုတော့ ပျော်နေသလိုပဲဗျာ…. ခုတော့ ကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ တစ်ရက်စာ မရှုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်က ကျောက်မရှာနိုင်တော့ဘူး" လို့ ဟိုပင်ကနေ ဖားကန့်ကို ကျောက်ရှာဖို့ ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုစိန်လင်းက ပြောပါတယ်။
အသက်နဲ့ လောင်းကြေးထပ်ပြီး ကျောက်ရှာနေကြသူတွေ့အဖို့ မူးယစ်ဆေးဝါးက သူတို့စိတ်ဖြေရာလို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Image caption လမ်းဘေးတဲတစ်ခုမှာ မူးယစ်ဆေးသုံးနေသူတစ်ဦး
ဒီမှာ ဝါကျင့်ကျင့်အရောင်နဲ့ အဖြူရောင်အမှုန့်တွေ ရောနေတဲ့ ဘိန်းဖြူမှုန့်ကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၂၀၀ လောက်နဲ့ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
၁ ခါရှုကို ၁ ပေါက်ရှုလို့ ခေါ်ပြီး အနည်းဆုံး ၂၀၀ ဖိုးနဲ့ဝယ်နိုင်ပြီး တခါထိုးပမာဏ ဘိန်းဖြူဆိုရင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀ ဖိုးအထိ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘိန်းဖြူကို အကြောထဲ ထိုးသွင်းသူတွေကတော့ သုံးစွဲမယ့် ဘိန်းဖြူပမာဏကို ဆေးထိုးအပ်ထဲ ထည့်ပြီး ရေနဲ့ရော၊ အကြောထဲကို ထိုးသွင်းကြပါတယ်။
ဖားကန့်မှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်လို့ ၃ ဦး သေဆုံး
Image caption ဖိုးသမားတွေ စုဝေးရာ တဲအတွင်းက မူးယစ်ဆေးသုံးပစ္စည်းတစ်ခု
မှော်နဲ့ မနီးမဝေး ဆိပ်မူရွာထဲမှာတော့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ သုံးပြီးသား ဆေးထိုးအပ်တွေကို လမ်းဘေးတလျှောက် မြင်ရပါတယ်။
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနဲ့ ကျောချင်းကပ်မှာကိုပဲ ဖိုးသမားတွေရဲ့ တဲလေးတွေ ဟိုတစု ဒီတစု ရှိနေပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ခပ်ကျယ်ကျယ် ဆိုင်ကယ် ဟွန်းသံတွေပေးပြီး ဆေးသမားတွေ အုပ်စုလိုက် ရောက်လာကြပါတယ်။
ဒီနေရာဟာ ညနေတိုင်း သူတို့တွေ စုဝေးရာအရပ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် YE AUNG THU/AFP
Image caption မြို့လယ်မှာ အပ်တန်းလန်းနဲ့ သွားနေသူတွေ အများကြီးရှိ
ခဏကြာတော့ ဘိန်းရှုသူရှု၊ အကြောထဲ ဆေးထိုးသူထိုးနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံ ယာယီရောက်ဖို့အရေးထက် ဘာကိုမှ သူတို့တွေ ဂရုမစိုက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။
မှိန်းပြီး ဇိမ်ခံနေကြသူတွေရှိသလို လက်တွေ ပေါင်တွေမှာ ဆေးထိုးအပ်တန်းလန်းနဲ့ ဥဒဟို သွားလာနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အသိစိတ်မဲ့ သွားလာနေကြသူတွေကို နေဝင်ရီတရော မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ခြောက်ခြားစရာကောင်းလှပါတယ်။
"ကျောက်လာရှာတယ်၊ ပိုက်ဆံလာရှာတယ်ဆိုတာ မိသားစုနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး နေချင်လို့ပေါ့ဗျာ …ဒါပေမဲ့ မပြေလည်ခဲ့ဘူး.." လို့ ကိုစိန်လင်းကလည်း သူ့ဘဝကြီးကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် အားလျော့သံနဲ့ ပြောပါတယ်။
Image caption ကျောက်မျက်မှော်တွေနဲ့ အနီးတဝိုက်ရွာတွေထဲမှာကိုပဲ လွှတ်ပစ်ထားတဲ့ ဆေးထိုးအပ်တွေကို လမ်းဘေးတလျှောက် ပြန့်ကျဲနေပါတယ်
"ခုက ဖိုးသမားအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတော့ ယင်းလည်း တော်တော်ကြီးလာပြီ၊ ဖြတ်ဖို့လည်း တော်တော်ခက်သွားပြီ၊ တစ်ရက်ကို မရှိဘူးဆို အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ် တခါတလေလည်း ၅ ကြိမ် ၆ ကြိမ် ပိုက်ဆံရှိရင် ရှိသလို သုံးတယ်" လို့ ကျောက်ရှာဖို့ မိုးညှင်းကနေ ဖားကန့်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
ခြေတွေ လက်တွေမှာ ဆေးထိုးအပ်ရာ ဗရပွနဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ အတော်လေး အားနည်းနေပုံလည်း ရပါတယ်။
အဝေးတနေရာကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း "ကိုယ့်ဘဝကြီးကို ဘယ်လိုမှကို မပြောတတ်တာ…"
"ကိုယ့်ကိုယ်သေသွားတာပဲ ကောင်းတယ်..ကိုယ့်မိဘတွေ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကို မပြရဲတာ… ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ထင်ကို မထင်ထားဘူး၊ ကိုယ်သုံးတုန်းကတော့ အပျော်သက်သက်ပဲ၊ ဒီလောက်ကြီး စုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်လို့ မထင်ထားဘူး" လို့ အဝေးတနေရာကို ခပ်တွေတွေကြီး လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း ကိုဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Phyo Hein Kyaw/BBC
Image caption ဆေးထိုးအပ်တွေကို နေရာအနှံ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မှော်ထဲကနေ ဖားကန့်မြို့ကို ပြန်ရောက်တော့ မိုးစုပ်စုပ်ချုပ် နေပါပြီ။
နေ့ခင်းဘက်မှာ ဖုန်ထူပြီး ခြောက်သွေ့လှပေမဲ့ ညဘက်မှာတော့ ပြန်လည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။
မီးရောင် ခပ်မှိန်မှိန်ထွန်းထားတဲ့ တည်းခိုခန်းတွေ၊ ပျော်ပွဲစားရုံတွေထဲ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ၊ လိင်အလုပ်သမတွေနဲ့ ညဟာ အလုပ်များနေပါတယ်။
မှော်တွေထဲက လောပန်ကြီးတွေ လာရောက်အပန်းဖြေကြတာဖြစ်လို့ တည်းခိုခန်းတွေမှာ အခန်းတစ်ခန်းရဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။
"ဖားကန့်က ပူတယ်လေ၊ ဒီတော့ ညဆို လောပန်တွေက ဟော်တယ်မှာ လာအိပ်ကြတာပေါ့" လို့ ဟိုတည်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
Image caption ဖားကန့်မြို့ကို အဝေးတစ်နေရာမှ မြင်ရစဉ်
ကျောက်တစ်ပွင့် ရရုံနဲ့ ချက်ချင်းသူဌေးဖြစ်နိုင်တာမို့ သူတို့တွေအတွက် ဒီငွေတွေကို ပျော်စရာ သုံးစရာ မရှားလှပါဘူး။
လွယ်လင့်တကူရတဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ အတူ ဟိုတယ်အခန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေကို အပြတ်ငှားပြီး အပျော်အပါးရှာကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှိန်ပြပြ လမ်းမီးရောင်အောက် ဒယီးဒယိုင်နဲ့ သွားနေကြတဲ့ ဆေးသမားတချို့ကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ကို ကားမောင်းပို့ခဲ့တဲ့ ကားဆရာကတော့ ညစာထွက်စားချိန် ကျွန်မတို့နဲ့ သူက လိုက်မလာခဲ့ပါဘူး။
"ဖားကန့်ကို ရောက်လို့မှ ဆေးမသုံးခဲ့ဘူးဆို ဘယ်တန်မလဲဗျာ" လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးတော့ တချက်ရယ်လိုက်ပြီး ဟိုတယ်ဘေးက အမှောင်လမ်းကြားလေးထဲ ဝင်ရောက် ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။